Hei、NdinguJerry-umsunguli weWebhu eSebenzayo kwiWebhusayithi eHlaziyiweyo（WHSR）。 Ndenze eli phepha ukuze uqonde ukuba isebenza njani le ndawo kunye nendlela esenza ngayo imali.
Unokufumana ezininzi zeendawo zokuphononongwa kwewebhu kunye neenkcukacha kwi-intanethi。 Kodwa、akusiyo yonke into efana ne-WHSR.
yethu ukuphonononga ukuhlaziywa zibhalwa ngokusekelwe kumava ethu okusetyenziswa kunye nedatha yangempela yeseva。 Ukubamba Izikhundla、ezifana isiluleko sethu sokusingqongileyo esiphezulu sewebhu、zisekelwe kuhlalutyo lwenjongo.
Sisebenzisa izicelo zesithathu kunye nesofthiwe yokuvavanya ukusekwa kwamasayithi kwi-host、kuqukwa：Ixesha lokuhlaziya iRobot、Bitcatcha、Uvavanyo lwephepha lewebhu、I-Google PageSpeed Insights、yaye Pingdom.
Ngokungafani nakwezinye iindawo ezininzi zokuhlaziya、asiqhelwanga ukusebenzisa izitoli zabasebenzisi ngaphandle kokuba ubunikazi babo kunye nobunikazi be-akhawunti buboniswe。奥ククフェファウクニャニセカクウィンファズウェファカティクウィエンカンパニエジンビニゾクバンバ.
2 Indlela I-WHSRの星の評価?
2.1 Izibalo ezilula emva kwesi：
3 Njani i-WHSR円座イマリ?
Kukho iinkalo ezintandathu ezibalulekileyo esizijongayo xa sihlola umphathi wewebhu：
Idumela leenkampani / ingxelo evela kubasebenzisi begunya
インテンゴ/ Intengo yemali
Sizimisela iisayithi zovavanyo kwiindawo ezahlukeneyo zewebhu kwaye sibuze imibuzo ngombono womsebenzisi：
Akukho nzululwazi yes rocket ekufumaneni inkonzo yokubamba ehambelana neemfuno zakho。 Wamkelekile ukuba ufunde umqhubi wewebhu yethu yokukhetha kwaye wenze ifowuni yakho.
Kwi-WHSR、iinkampani zokubamba zilinganiswa ngokubhekiselele kwi-10-nyathelo、inkqubo yokulinganisela inkwenkwezi ezintlanu-kunye nomlinganiselo ophezulu njengeenkwenkwezi ze-5 kunye neenkwenkwezizze-0.5 ez.
Ukulinganiswa kweenkwenkwezi kuya kubonakala kuyo yonke inkcazo yokuphonononga esiyipapashwe（isampula）kunye netafile enkulu esiyakhe kuyo ikhasi lethu lohlalutya.
Ukumisela eli nqanaba、sisebenzisa i-80ポイント評価チェックリストukulinganisa umphathi wewebhu kwaye uyayichaza ixesha elide（sisebenzisa iindleko zeminyaka emine）.
Izibalo ezilula emva kwesi：
X = Inani lokusingatha kwi-80ポイントチェックチェックリストY =（ixabiso lokubhalisa ngenyanga x XUMUMX + xabiso lokuvuselela ngenyanga x XUMUMX）/ 24 Y <$ 24 /月、Z = Z48 Y = $ 5 /月-$ 1 /月、Z = Z5.01 Y> $ 25、Z = Z2 Ukulinganiswa kweenkwenkwezi zokugqibela = X * Z
Uphando lomsebenzisi kunye nodliwano-ndlebe（umthombo：Uhlolo lweBlueHost）.
Iirekhodi zengxoxo zangempela eziphilayo（umthombo：Ukuhlaziywa kwesiGqeba）.
Uphando olunzulu ngobambiso lwenkampani ibamba iToS（umthombo：A2Hosting Review）.
I-WHSR iqhutywa iqela elincinci labalobi bexesha elipheleleyo kunye nabathengisi bewebhu。 Ukuphila kwethu kuxhomekeke kwingeniso evela kwiwebhusayithi.
Sihlawulelwa、ngefom yekheshi okanye enye indlela yomvuzo kuquka iikredithi zokubamba mahhala、amakhadi wesipho sase-Amazon、okanye ikhonkco.
Oku kuthethi、nangona kunjalo、ukuphononongwa kwethu kusekelwe kuhlalutyo lwenjongo kwaye asiyikuyekethisa uklinganisa kweth ummiselo esekelwe kwingeniso yemali.
Sikholelwa ukuba kukho intengiso yentengiso yazo zonke iinkampani zokubamba phaya。 Umsebenzi wethu kukubonelela ngolwazi oluhle kakhulu kubasebenzisi bethu kwaye sibalinganise nenkonzo yokubamba efanelekileyo.
Ukuba sinesiqinisekiso sokusebenzisana neenkampani kwaye ucofa kwiziko lethu okanye usebenzise ikhowudi yethu yokuthenga、siyifumana ikhomishini.
Ukuthenga ngekhonkco lethu lokunxibelelana akukubizi iindleko ngaphezulu。 Ngamanye amaxesha、amakhonkco ethu adibeneyo anokukunceda ugcine imali njengoko ezinye ii-brand zinikezela izaphulelo ezikhethekileyo kubasebenzisi bethu（ngenxa yendawo ekhethekileyo ye-WHSR kwimakethi yokubamba）.
Ukuba usenokungathandabuzeki、ungafunda okungakumbi malunga IQumrhu leWCED apha okanye sifunde I-FTC esemthethweni.